Wararka - Maxay yihiin shuruudaha laga sheegayo kubbadda birta ah?
Weydiinta, macaamiisha badanaa wey soo baxaan oo weydiiyaan: Sidee loo iibiyaa kubbadaha birta ah? Waa imisa kubbada birtu?
Waxaan aaminsanahay inay tani tahay arrinta ugu muhiimsan macaamiisha. Had iyo jeer uma soo bandhigo macaamil macaamiisha isla markiiba, taas oo sidoo kale mas'uul ka ah macaamilka. Maaddaama macmiilku uusan xirfad-yaqaan ahayn, waa la fahmi karaa inuu meesha ka saarayo qiimaha weydiista oo uusan caddeyn shuruudaha oraahda looga baahan yahay.
Markaa aan kuu sheego shuruudaha looga baahan yahay oraahda kubbada birta ah:
1. Baaxadda kubbadda birta ah: metrik 0.3MM-200MM; inji 1/64 ″ -6 ″;
2. Wax kubad bir ah:
(1)Bal steel carbon yarl — Q235, tani waxay u qaybsantahay in daaweyn kuleyl ah, yacni, ama daaweynta carburburinta;
(2)Qaadista birta birta ahl-GCr15, heerka Mareykanku waa AISI52100, heerka Jarmalku waa 100Cr6, heerka Japan ee SUJ2;
(3)Kubad aan birta ahayn—– Heerka qaranka 304, 316, 316L, 420, 440, 440C, iwm; qalabka aan caadiga ahayn 204, 665, iwm;
3. Ku tirada kubbada birta ahs: Fadlan noo sheeg tirada. Waxaan ku xisaabineynaa sicirka tirada. Haddii tiradaadu yartahay, fadlan ii sheeg. Don’t xishoon doonaa, waxaan u qaadan doonnaa tirada si dhab ah;
4. Kubadda birta / ujeedada: G10, G16, G28, G40, G60, G100, G200, G1000; tirada ka yar, sax ahaanta ayaa sareysa, haddii aadan bixin’ma ogaan fasalka, fadlan sheeg shuruudahaaga dulqaad, ama Isticmaalka kubbadaha birta ah, waxaa laga yaabaa inaan xukumi karno shuruudaha saxda ah ee kubbadaha birta;
5. Shuruudaha baakadaha ee kubadaha birta ah: bacda la tolay + bacda tan, durbaanka birta + sariirta, kartoonka + sariirtaada, sanduuqa alwaax + sariirta, dhalada yar, iwm; baakadaha ayaa sidoo kale loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha;
6. Waxyaabaha kale ee oraahda ah ee kubbadaha birta ah: Dekeddee ayay alaabtu timaaddaa? Inay soo sheegaan FOB ama CFR / CIF, fadlan sidoo kale sharax kuwan;
Waxyaabaha kor ku xusan waa cad yihiin, Kubadaha 'Condar Steel Balls' ayaa xaqiiqdii awoodi doona inay kuu xisaabiyaan qiimayaasha saxda ah iyo kuwa la door bidaayo adiga!